အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဆေးဝန်ထမ်း(၅)ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို ကုလသမဂ္ဂ ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Ghazniမြို့တွင် ဆေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကလေးငယ်အား ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးပေးနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Nangarharပြည်နယ်တွင် ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဆေးဝန်ထမ်း (၅)ဦးသည် ဇွန် ၁၅ ရက်က ကွင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန်(၅)ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုလုပ်ရပ်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂကက ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ဆေးဝန်ထမ်းများအား (၅)ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအကြိမ်သည် Nangarharပြည်နယ်တွင် ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးပေးနေသည့် ဝန်ထမ်းများကို နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး(OCHA)က ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မတ်လပိုင်းတွင်လည်း ဆေးဝန်ထမ်း(၃)ဦး တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Jawzjanပြည်နယ် Aqcha ဒေသတွင် ဆေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကလေးငယ်အား ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးပေးနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို အံဩထိတ်လန့်မိတယ်။ စာနာမှုမရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရမယ်”ဟု အာဖဂန်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဝင်Ramiz Alakbarovက ဆိုသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူရန် အာဖဂန်အာဏာပိုင်များကို ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ဘယ်နေရာဒေသမဆို ဆေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ကုလသမဂ္ဂက ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာ တရားမျှတမှုရှိတယ်။ ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ကို ကာကွယ်ပေးသူတွေကို တိုက်ခိုက်တာဟာ ကလေးငယ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့က ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။”ဟု Ramiz Alakbarovက ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးသွားသူများ၏ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို နှစ်သိမ့်အားပေးကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာရသူများအမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆုတောင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။သတင်းများအရ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က ပိုလီယိုရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၅၆)ဦး ထပ်တိုးလာကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Photo1： A health worker givesapolio vaccine toachild during an anti-polio vaccination campaign in Ghazni city, eastern Afghanistan, Jan. 20, 2021. TO GO WITH “Afghanistan launches polio vaccination targeting 9.9 mln children” (Photo by Rohullah/Xinhua)
Photo2:A health worker givesapolio vaccine toachild during an anti-polio vaccination campaign in Aqcha district of Jawzjan province, Afghanistan, Jan. 17, 2021. (Photo by Mohammad Jan Aria/Xinhua)